Nei Jamaica? Mhinduro kuUS "Usafambe" Advisory
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Nei Jamaica? Mhinduro kuUS "Usafamba" Advisory
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Nei Jamaica? Mhinduro kuUS "Usafamba" Advisory
Hupfumi hweJamaica hunoenderana zvakanyanya neindasitiri yekufambisa neyekushanya. Iyo US inoburitsa Level 4 yekufamba yambiro kunyevera kukuru uye kutyisidzira kurudzi rwechitsuwa. Vazhinji vavo vanoshanda uye vanovimba nehupenyu hweindasitiri yekufambisa neyekushanya, uye maAmerican ndivo vazhinji vevashanyi vavo.
Dhipatimendi reUnited States State rakabatana neCDC rakaburitsa Chikamu cheChipiri Chekuraira kweJamaica.
Chikamu chechipiri chezano nderwezano repamusoro muketani uye zvinoreva maAmerican "Usafambe."
Gurukota rezvekushanya reJamaica rinopindura yambiro iyi muchirevo chakaburitswa eTurboNews nhasi.
Gurukota rezveKushanya kuJamaica, Hon. Edmund Bartlett, akaburitsa chirevo ichi maererano neUnited States ichiburitsa Zano rekuti "Usafamba" kuJamaica:
Jamaica nguva pfupi yadarika yakagamuchira mushanyi wayo wemiriyoni imwe kubva payakavhurwazve kufamba muna Chikumi 2020, uye vashanyi vanogona kunzwa vane chivimbo nekuziva kuti Jamaica's Resilient Corridors - inovhara zvinopfuura 85 muzana yechigadzirwa chekushanya pachitsuwa ichi uye inosanganisira isingasviki muzana muzana yevagari vedu - vane yakanyorwa COVID-19 chirwere chehutachiona pasi pezana muzana pagore rapfuura.
Izvi zvakawanikwa kuburikidza nezvirongwa zvine simba zvakagadzirwa pamwe chete nezviremera munzvimbo dzese dzehutano nekushanya. Aya maprotocol aive pakati pekutanga kugamuchira iyo World Travel & Tourism Council Kuchengetedzwa Kwekufamba kwakatibvumidza kuvhurazve zvakachengeteka muna Chikumi wa2020.
Hutano nekuchengeteka kweJamaican yega yega uye mushanyi wese munyika anoramba ari pamberi pedu, uye isu tinotarisira kuti danho rechina renzvimbo neUnited States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ichave ipfupi mukureba.
Ipo Jamaica iri imwe yenyika makumi manomwe nenomwe pasirese, kusanganisira vazhinji vehama dzedu dzeCaribbean, kuti vatore chinhanho chechina, tinoramba tine chivimbo chekuti maResilient Corridors nema protocols anoenderera mberi nekutitora munzira kwayo.
IUnited States yakanga yapa nhanho yechina yekuyambira kwekufamba kune dzinoverengeka dzenyika dzinovakidzana-dzinoenderana neCaribbean nyika.
Pakuburitsa iyo Usafambe Kuraira, hurumende yeUS nhasi yasiya chikamu chekuti zvakachengeteka zvakadii kushanyira Jamaica zvichienzaniswa neFlorida kana Hawaii - kana zvasvika pakutyisidzira kwehutachiona hweCOVID.
Gurukota rezvekushanya muJamaica, Hon. Edmund Bartlett, anga achingova iye mutungamiriri wenyika yake asi nekusika kwake iyo Global Tourism Resilience uye Crisis Center, Jamaica yanga ichitungamira pasi rose kana zvasvika pakushanya kwakachengeteka uye nedambudziko.
The Nzvimbo dzeDziviriro Kudzora nekudzivirira (CDC) yakaburitsa Chikamu 4 Kufamba Hutano Cherechedzo nekuda kwe COVID-19, inoratidza yakanyanya mwero weECVID-19 munyika. Ngozi yako yekubatira COVID-19 uye kukura zviratidzo zvakakomba inogona kunge yakaderera kana iwe wakazara jekiseni ne FDA yakabvumidzwa jekiseni. Usati waronga chero nzendo dzekunze, ndapota ongorora zvinokurudzirwa neCDC vaccin uye isina kubayiwa vafambi. Shanyira Embassy COVID-19 peji kuti uwane rumwe ruzivo nezve COVID-19 muJamaica.
Idzo dziri pazasi-dzakanyorwa nzvimbo dzeKingston nekuda kwe mhosva.
Idzo dziri pazasi-dzakanyorwa nzvimbo dzeMontego Bay nekuda kwe mhosva.
Spanish Town nekuda kwe mhosva.
Nyika pfupiso: Mhosva dzechisimba, dzakadai sekupinda mudzimba, kuba nezvombo, kubata pabonde, uye kuuraya zvinowanzoitika. Kushungurudzwa pabonde kunoitika kazhinji, kusanganisira pazvinhu zvese zvinosanganisira resorts. Mapurisa emunharaunda anoshaya zvekushandisa kuti apindure zvinobudirira kuzviitiko zvakakomba zvematsotsi. Emergency services inosiyana munzvimbo yese yechitsuwa, uye nguva dzekupindura dzinosiyana kubva pamatanho eUS. Vashandi vehurumende yeUS vanorambidzwa kuenda kunzvimbo dzakanyorwa pazasi, kushandisa mabhazi eruzhinji, uye kutyaira kunze kwenzvimbo dzakatemerwa dzeKingston husiku.
IU.S. yakapa yambiro yakafanana pamusoro pevamwe vavakidzani veCaribbean, kusanganisira Bahamas.